बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? कसरी छुटकारा पाउने ? - ramechhapkhabar.com
बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? कसरी छुटकारा पाउने ?
खासमा यो एक स्नायु प्रणालीको रोग हो । गोडा हल्लाउँदा शरीरमा डोपामाइन हर्मोन आउन थाल्छ जसकारण व्यक्तिलाई घरिघरि हल्लाउन मन लाग्छ । डोपामाइनले सुखको अनुभूति दिलाउँछ ।